I-Priv. I-tatami1 yabantu abangu-1-4 Mahhala landa ibhayisikili - I-Airbnb
I-Priv. I-tatami1 yabantu abangu-1-4 Mahhala landa ibhayisikili
Ingaphakathi elihlotshiswe ngekamelo elidala laseJapane, ungakhululeka njengendlu yakho nge-tatami. Ubuningi babantu abangu-4. I-WiFi yamahhala ifakwe! Ziningi izitolo ngoba isendaweni engena emhumeni wezitolo. Kuyimizuzu emi-2 ngezinyawo ukusuka e-Don Quixote(izimonyo, ukudla ngo-10am~3am) kanye nesitolo esingu-30sec kuya ku-24h. Kukhona indawo yokucima ukoma kwamakhelwane. Kunezitolo eziningi ezingadla i-Ramen, i-Izakaya(njengeshibhi), i-Korean BBQ, i-Udon, Ibhikawozi, Ikhefi njll. Kuwuhambo lwemizuzu emi-3 ukuya eziphethwini ezishisayo.
IJapane Elidala lekamelo elihlotshiswe ngomfanekiso, ungakwazi ukuphumula i-tatami efudumele neyamukelekayo. Ukulala kuyi-futon.
Umkhawulo wabantu abangu-4. I-WiFi yamahhala, i-Air conditioner, amathawula, Ikhofi kanye netiye laseJapane kuyatholakala. Bahlanganyele amagumbi okugeza amabili, indlu yangasese, imicrowave, igedlela likagesi, isiqandisi, izitsha njll nesinye isivakashi.
Ngenxa yokuthi isendaweni, engene emgwaqeni wenxanxathela yezitolo, kunezinhlobonhlobo zezitolo.
Imizuzu emi-2 ukuhamba u-Don Quixote namasekhondi angama-30. ukuze kube lula ezitolo. Iseduze kwakho kukhona nendawo yokucima ukoma. Izitolo ezingaba ukudla Ziningi. I-ramen, ithaveni, inyama eyosiwe, isitolo sekhofi, njengama-noodle.
Uma kungenzeka lapha.